अमेरिकी सरकारले घोषणा गरेको राहत क-कसले पाउँछन् ? – Dcnepal
अमेरिकी सरकारले घोषणा गरेको राहत क-कसले पाउँछन् ?
सीपीए हरिकुमार शर्मा के भन्छन् ?(अन्तर्वार्तासहित)
प्रकाशित : २०७६ चैत १६ गते ४:५०
वासिंगटन डिसी । अमेरिकी राष्टपति डोनल्ड टम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरी जारी गरेको कोरोनासम्बन्धी राहत रकम क-कसले पाउने र क- कसले नपाउने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र भइरहेका बेला नेपाली मूलका चर्चित सीपीए हरि शर्माले यो रकम नेपाली मूलकका अमेरिकी नागरिकहरु र अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न कानूनी हैसियत प्राप्त(ग्रीन कार्ड) गर्ने व्यक्तिहरुले पाउने बताएका छन् ।
डिसी नेपालसंग प्रत्यक्ष संबादमा सीपीए शर्माले बताएअनुसार, विवाह नभएको व्यक्तिका लागि बर्षको ७५ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएकाहरुका लागि १२ सय डलर राहत रकम पाउने छन् । त्यसैगरी पति पत्नीको १ लाख ५० हजारभन्दा कम संयुक्त आम्दानी हुने परिवारले २४ सय डलर राहत पाउने छन् ।
अविवाहितमध्ये जसले ७५ हजारभन्दा बढी ९९ सय हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्ति छन् भने उनीहरुले पनि राहत पाउंछन् तर १२ सय डलर होइन अनुपातिक हिसाव १ हजार डलरसम्म राहत पाउने व्यबस्था गरिएको छ । जसले ९९ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्छ त्यस्तो अविवाहित व्यक्तिलाई भने राहत रकम उपलब्ध हुने छैन ।
विवाहितको हकमा १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ९८ हजारभन्दा कम आन्दानी गरेको छ त्यो परिवारले पनि राहत रकम पाउने व्यबस्था राष्टपति टम्पले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेखित रहेको सीपीए शर्माले डिसी नेपाललाई बताए ।
उनका अनुसार, १ लाख ९८ हजारभन्दा बढी रकम कमाउने परिवार भए त्यस्तो परिवारलाई राहतको व्यबस्था गरिएको छैन । राहत प्याकेजअनुसार, २४ सय रकम राहत पाउने परिवारमा यति बच्चाहरु छन् भने प्रतिबच्चा ५ सय डलरका हिसावले राहत रकम प्राप्त गर्ने छन् । यसहिसावले ४ जनाको परिवार छ भने सो परिवारले ३४ सय अमेरिकी डलर राहत रकम पाउने छन् ।
सरकारले सो राहत रकम सन् २०१८ सालको ट्याक्स फाइल गरेको विवरणका आधारमा उपलब्ध गराउदै छ । यस्तो रकम यदि कर फाइल गर्दा डाइरेक्ट डिपोजिट गर्ने व्यबस्था गरिएको रहेछ भने सिधै बैंक खातामा पठाइने छ । राहत वितरण अप्रिल ६ तारिकबाट हुने र यस्तो रकम तत्काल नै पाइने छ ।
जसले कर फाइल गर्दा डाइरेक्ट डिपोजिट गरेको छैन उसलाई चेक बनाएर घरमा पठाउने पर्ने हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई राहत रकम पठाउन केही समय लाग्न सक्छ । तर पनि सरकारी दावीअनुसार, सकेसम्म चाडै नै सो रकम घर घरमा पठाइने छ ।
साना व्यापारीहरुको हकमा पनि अत्यन्त न्यून व्याजमा सरकारले २५ हजार डलर रकम तत्काल उपलब्ध गराउने राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।
सीपीए शर्मा नेपाली मूलका साना व्यापारीहरुलाई सो राहतमा प्राप्त हुने रिण रकम लिएर प्रयोग गर्न आग्रह गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित राज्यहरुले त्यस्तो रिण रकम मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्ने हुंदा यस्तो मौका नगुमाउन शर्माको आग्रह छ ।
कस्ता कस्ता राहतका कार्यक्रमहरु छन् त ? अमेरिकी सरकारका ? थप जानकारीका लागि सीपीए शर्मासंगको कुराकानीको यो भिडियो हेर्नुहोस्
कस्ले पाउँछ अमेरिकी सरकारको राहत ? अमेरिकी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरको राहत क कस्ले पाउछँन ? नेपाली समुदाय यसबाट कसरी लाभान्वित हुन्छ ? क-कस्ले सो रकम दावी गर्न सक्छन् ?चर्चित नेपाली सीपीए हरिकुमार शर्मा सँगको प्रत्यक्ष कुराकानी
Posted by DCnepal on Saturday, March 28, 2020